Nin lagu xukumay inuu xabsiga ku dhex daawado Filim - BBC News Somali
Nin lagu xukumay inuu xabsiga ku dhex daawado Filim
18 Disembar 2018
Lahaanshaha sawirka LAWRENCE COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Image caption David Berry Jr waa inuu filimkaas bishiiba hal mar ku dhex daawado xabsiga
Nin lagu helay dambi ah inuu si sharci darro ah u ugaarsanayay deero ayaa lagu amray inuu xabsiga dhexdiisa ku daawado filim kartoon ah oo lagu magacaabo Bambi, ka dib markii sida la sheegay uu laayay "boqollaal" deero.
David Berry Jr oo ah ugaarsade ka soo jeeda gobolka Missouri ee dalka Mareykanka ayaa ku khasbanaan doona inuu ugu yaraan bishiiba hal mar daawado filimkaas, inta uu xabsiga ku jiro muddada halka sano ah ee lagu xukumay.
Isaga iyo 2 xubnood oo ka tirsan qoyskiisa ayaa la xiray bishii Agoosto, iyagoo loo heystay iney dileen deero, ka dibna ay madaxeeda qaateen, jirka intiisa kalena ka tageen, sida ay dacwad oogeyaasha sheegeen.
Waa kuwee xayawaanka adduunka ugu dhufashada kulul?
Mukulaal iyo Eey noqday “saaxiibbo” is jecel
Tareenada Japan oo lagu rakibay guux u eg dhawaaqa eeyahay!
Waxaa lagu soo warramay inuu ahaa mid ka mid ah kiisaskii ugu weynaa ee ugaarsiga sharci darrada ah oo soo mara taariikhda gobolka Missouri.
Garsooraha maxkamadda qaadeysay dacwadda ayaa xukunka xabsiga ah ee dambigaas loogu riday ka sokow, waxa uu ku amray Berry Jr inuu si joogto ah u daawado filimka Bambi, kaa soo marka ugu horreysa uu daawan doono 23-ka bisha Diseembar ama ka hor.
Filimkaas kartoonka ah oo la sameeyay sannadkii 1942-dii ayaa ku saabsan nin ugaarsade ah oo dilay hooyo deero ah oo dhashay deerada filimka loogu magac daray ee la yiraahdo Bambi.
Image caption Dacwad oogeyaasha ayaa aaminsan in "boqollaal deero" la dilay
Baaritaan socday muddo bilo ah ayaa horseeday in la soo xiro Berry Jr, aabihiis David Berry Sr iyo walaalkiis oo lagu magacaabo Kyle Berry, sida uu shaaciyay wargeyska maxalliga ah ee Springfield News-Leader.
Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn tirada deerada ah ee ay dileen, waxay mas'uuliyiinta dadka u dooda xuquuqda xayawaanka ku tilmaameen dhowr boqol oo deero.
Berry Jr ayaa muddo hal sano ah ku xirnaan doona xabsiga Lawrence County, si uu u maro ciqaabtiisa ah inuu xayawaan duur jog ah dilay.
Wuxuu sidoo kale muddo 120 maalmood ah ku xirnaan doonaa xabsiga Barton County, halkaasoo uu ku qaadan doono ciqaabtiisa ah inuu hub u isticmaalay si sharci darro.
Ula jeedada ninkan loogu xukumay in uu daawado filimkan Kartoonka ayaa u muuqata in ay tahay in uu fahmo dhibaatooyinka ay marayaan ilmaha deerada marka waalidkooda la dilo.